हाम्रो डचटाउन ब्यापारहरूलाई सहयोग गर्दै t डचटाउनस्टा.लि.
हाम्रो डचटाउन व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दै
डचटाउनस्टेल, डचटाउन मुख्य सडकहरूर डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला तपाईं हाम्रो समुदायको एक हिस्सा हुनुहुन्छ भनेर खुसी हुनुहुन्छ! हाम्रो संगठनहरूबारे जान्नुहोस् र हामी केहि तरिकाहरू जाँच गर्नुहोस् कि हामी डचटाउन र तपाईंको व्यवसायमा जीवन्त गतिविधि ल्याउनका लागि सँगै काम गर्न सक्दछौं।
हाम्रो फेसबुक समूहमा शामिल हुनुहोस्!
डचटाउन बिजनेस नेटवर्क एक समूह हो जहाँ व्यापार मालिकहरूले च्याट गर्न, श्रोतहरू साझा गर्न, र डचटाउन संगठनहरूको मद्दत लिन सक्दछन्। आज सम्मिलित हुनुहोस्!
हामी शहर, सरकार वा ठूलो व्यवसाय होइनौं। हामी तपाईका छिमेकीहरू र साथी व्यवसायका मालिक हौं जसले हाम्रो समयलाई छिमेकीमा स्वयम्सेवा गर्छन्।
विशेष गरी, डचटाउन मुख्य सडकहरु एक गैर नाफा हो कि उद्देश्य को लागी विभिन्न स्वामित्व लाई आकर्षित गर्न को लागी, स्थानहरु, ठाउँहरु, र अनुहारहरु लाई बढावा दिन को लागी, र डचटाउन छिमेकी मा कब्जा बढाउनु हो। डचटाउन सामुदायिक सुधार जिला एक विशेष कर जिल्ला हो कि सम्पत्ति कर मा एक सानो वृद्धि को उपयोग गरी छिमेकी लाई अधिक सुरक्षित, सफा, र हरियो बनाउन मा काम गर्दछ। हामी एक ब्रान्ड — DutchtownSTL अन्तर्गत छिमेकी बजार।
हाम्रो प्रयासलाई कोष दिनुहुन्छ?
हाम्रो प्रयासहरू समुदाय सुधार जिल्ला द्वारा संकलित करहरूको माध्यमबाट उठाइएको रकमको साथ साथै व्यक्तिगत चन्दा, अनुदान, र अनुदान साझेदारीहरू जुन हामी फेला पार्न सक्दछौं द्वारा लगानी गरिन्छ। यदि तपाईं हाम्रो काम समर्थन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सक्नुहुन्छ डचटाउन मुख्य सडकहरु लाई दान गर्नुहोस्.
हामीसँग के प्रस्ताव छ?
डचटाउन संगठनहरू हाम्रो छिमेकीहरू र स्थानीय व्यवसायलाई संसाधन र जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्न एक साथ आएका छन्।
डचटाउन व्यवसायका लागि
हाम्रो डचटाउन व्यवसायका लागि दुबै नयाँ र स्थापित छन्, हामी निर्माण गर्दैछौं शहर, राज्य, र संघीय स्रोतहरूको सूची तपाईंलाई एक व्यवसाय सुरू गर्न र परमिट, लाइसेन्स, र करहरूमा हालैको रहनका प्रक्रियाहरू मार्फत मद्दत गर्न हामी तपाईंलाई आफ्नो व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्न वाथथ्रु गाईडहरू निर्माण प्रक्रियामा छौं (हाम्रो जाँच गर्नुहोस्। गुगल मेरो व्यवसाय मा प्राप्त गर्नका लागि मार्गदर्शन [भाग एक र भाग दुई] हामी केमा काम गरिरहेका छौं उदाहरणका लागि)। थप रूपमा, हामी तपाईलाई कुनै शुल्क बिना तपाईको व्यवसाय लाई बढावा दिन मद्दत गर्न सक्छौं - हामीलाई तपाईले यहाँ के समाजमा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा फैलाउन सहयोग गरौं! केवल हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्.
हामी पनि नियमित रूपमा पोष्ट गर्दछौं DutchtownSTL ब्लग जब सहायता को लागी अवसरहरु हाम्रो व्यवसाय को लागी आउँछन्। कोभिड -१ pandemic महामारीको समयमा हामीले तपाइँलाई मद्दत गर्न एउटा पोस्ट प्रकाशित गरेका छौं सेन्ट लुइस शहरबाट सानो व्यवसाय अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस्, र हामीले जानकारी साझा गरेका छौं सानो व्यवसाय प्रशासन आपत loansणको लागि आवेदन र कोरोनाभायरस प्रतिक्रिया ऐन अन्तर्गत नियमहरु प्रबन्धन। तपाईं अधिक समाचार र अपडेटहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ DutchtownSTL को फेसबुक पृष्ठ, ट्विटर मा utchdutchtownstl, वा हाम्रो मा डचटाउन व्यवसाय मालिकहरू फेसबुक समूह.
डचटाउनका सबैका लागि
DutchtownSTL का विस्तृत सूची कम्पाइल गरिएको छ छिमेकी संसाधनहरू, स्थानीय अधिकारीहरूको लागि सम्पर्कहरू सहित, उपयोगिताहरू, र गैर आपतकालीन सेवाहरू। हामीले मार्गदर्शकहरू पनि सिर्जना गरेका छौं नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोमा रिपोर्ट फाइल गर्ने, तपाइँको छिमेकी सुधार विशेषज्ञसँग काम गर्दै, र सेन्ट लुइस पुलिसलाई समस्या रिपोर्ट गर्दै.
हामी कसरी काम गर्छौं?
को भागको रूपमा अर्बनमेन पहल, डचटाउन संगठनहरू अन्तर्गत काम गर्दछ मुख्य सडक + + १ पोइन्ट दृष्टिकोण। पाँच छिमेकी-नेतृत्व समितिहरु एक महिनामा एक पटक भेट्नुहोस् र डाउनटाउन डचटाउन र डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला बोर्डहरूमा रिपोर्ट गर्नुहोस्। हामीले भर्खरै आंशिक समय भाडामा लिएका छौं डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक यी गतिविधिहरू समन्वय गर्न मद्दतको लागि, तर हाम्रो कामको बहुमत स्वयंसेवकहरू द्वारा संचालित गरिएको छ।
हाम्रो डचटाउन समितिहरु लाई भेट्नुहोस्
तपाईं हाम्रो पाँच समितिको बारेमा सबै पढ्न सक्नुहुन्छ र यसमा सामेल हुनको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/ कमिटीहरू, वा हामी के गर्छौंका बारे समीक्षाका लागि पढिरहनुहोस्।
डिजाईन कमेटीले छिमेकीको भौतिक तत्त्वहरूमा सुधार कार्य गर्दछ। हाम्रो छिमेकको उपस्थिति र कार्यक्षमता दुबै सुधार गर्ने र डचटाउनको घना र ऐतिहासिक निर्मित वातावरणको लाभ उठाउने हाम्रो लक्ष्य छ। स्टोरफ्रन्ट सुधारहरू वा अन्य शारीरिक सुधारहरूका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् Design@dutchtownstl.org.
आर्थिक जीवन समितिले लगानी आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्छ। हामी छिमेकमा दुबै नयाँ र स्थापित व्यवसायहरूको लागि समर्थन प्रदान गर्दछौं। सम्पर्क ev@dutchtownstl.org लगानी अवसरहरूको लागि।
पदोन्नति समिति डचटाउनको मार्केटिंग हात हो। हामी यस वेबसाइट र डचटाउनको सामाजिक मिडिया च्यानलहरू प्रबन्ध गर्दछौं, र हामी तपाईंको व्यवसायको बारेमा सन्देश फैलाउन चाहन्छौं। मार्केटिंग विचारहरू, घटनाहरू, वा व्यापार पदोन्नतीहरूका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् पदोन्नति @dutchtownstl.org.
संगठन समितिले दुबै पुरानो र नयाँ साझेदारहरू मार्फत डचटाउनमा समुदाय निर्माण गर्दछ। हामी डचटाउनमा काम सम्पन्न गर्न कोष स्रोतहरू, सामुदायिक संगठनहरू, र स्वयंसेवकहरू जडान गर्न खोज्छौं। हाम्रो कामको लागि स्रोतहरू विकास गर्न मद्दतको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् संगठन@dutchtownstl.org.
सुरक्षित सफा र हरियो समिति
सेफ क्लिन एण्ड ग्रीन कमेटी सुन्दरता, रखरखाव, सुरक्षा, सामुदायिक न्याय सेवाहरू, र हरियो पहलका लागि रणनीतिहरू विकास र लागू गर्दछ। हामी डचटाउनको धारणा र वास्तविकता दुबै सुधार गर्न काम गर्दछौं व्यवसाय, निवासी र आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न। सम्पर्क scg@dutchtownstl.org संलग्न हुन।
हामी कसरी सँगै काम गर्न सक्छौं?
हाम्रो संगठनहरू मात्र सफल हुन्छन् जब हामीसँग हाम्रो डचटाउन व्यवसाय र छिमेकीहरू हामीसँग काम गरिरहेका छन्। डचटाउनलाई अद्भुत, विविध, र जीवन्त राख्न हामी सबैबाट कडा मेहनतको आवश्यकता छ।
एक समितिमा सम्मिलित हुनुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस विचारहरू, प्रश्न, वा सरोकारहरू, वा बस यहाँ क्लिक गर्नुहोस् dutchtownstl.org हामीलाई अझ राम्ररी चिन्न र डचटाउनमा भइरहेको सबै महान चीजहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि। हामी यहाँ छ सबैको लागि एउटा फलिफ्री डचटाउन छिमेक निर्माण गर्न मद्दत गर्न।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो सेप्टेम्बर 21st, 2021 .
डचटाउन STL.org हाम्रो डचटाउन व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दै